ကျန်းမာ​ရေး – PoPinVdo
November 13, 2018 popin vdoကျန်းမာ​ရေး / ဗဟုသုတ / အစားအသောက်No Comment on သံပုရာသီးရေနွေးစိမ်ရည်ကို တစ်နှစ်ကြာသောက်ပြီးနောက်
သံပုရာသီးရေနွေးစိမ်ရည်ကို တစ်နှစ်ကြာသောက်ပြီးနောက် နံစာစားပြီးတိုင်း အခွံစိမ်းစိမ်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သံပုရာသီးတစ်လုံးကို လေးစိပ်စိပ်၍ ရေနွေးဖြူစိမ် သောက်ပေးရမှာပါ။ သံပု ရာသီးတွေ နွမ်ပျော့သွားတဲ့အထိ ရေနွေးဖြူအသစ် ထပ်လောင်းထည့်၍ ရေဆာတဲ့အခါတိုင်း သောက်ပေးပါ။ ဖန်ခွက်၊ ကော်ခွက်၊ စတီးလ်ခွက်၊ ဖိုင်ဘာခွက်တွေကိုမသုံးဘဲ…
မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း မှတ်သားထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း (၇) မျိုး
November 12, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း မှတ်သားထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း (၇) မျိုး
မျက်မှန်ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို မျက်မှန်တပ်နေရသူတွေသာသိမယ်။ ကိုယ်နှင့်မခွာအမြဲဆောင်ယူသွားနေရတဲ့ပစ္စည်းထဲမျက်မှန်ကထိပ်ဆုံးပါတယ်။ မျက်မှန်ကိုင်းလေးကျိုးသွားလို့ ဆိုင်သွားပေးထားရင်တောင် တစ်ရက်လောက်မျက်ကန်းဘဝထဲရောက်သွားသလိုခံစားရတာမျိုးက စာရေးသူကိုယ်တွေ့ပါ။ ဒါကြောင့်မျက်မှန်တပ်သူတွေအတွက် မျက်မှန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတလည်းရပြီး အကျိုးလည်းရှိစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။အမှောင်ထဲမှာမျက်မှန်ရှာတဲ့အခါ ကိုယ်အပြင်ထွက်ခါနီးမှ မီးကပျက်၊ မျက်မှန်ဘူးကိုလည်းဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိတဲ့အခါ ဒီနည်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်။ အနုမြူသော့ချိတ်ကို ကိုယ့်မျက်မှန်အိတ်ထဲချိတ်ထားပါ။ သို့မဟုတ်တွဲချည်ထားပါ။…
လူ့အသက်ပေါင်းများစွာတို့ကို ကယ်တင်ပေးနိုင်သည့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် ဆေးနည်း
November 12, 2018 popin vdoကျန်းမာ​ရေး / ဗဟုသုတNo Comment on လူ့အသက်ပေါင်းများစွာတို့ကို ကယ်တင်ပေးနိုင်သည့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် ဆေးနည်း
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် ဆေးနည်းမှာ အင်္ဂလန်မှ ပါကစ္စတန်သို့ အစည်းအဝေးအတွက် ရောက်ရှိနေသော လူတစ်ဦးသည် ရုတ်တရက် နှလုံးရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရသည်။ နှလုံးခွဲစိပ် ဆရာဝန်ကြီးက ထိုလူနာကိုစမ်းသပ်ပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသည့် ရောဂါကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက် ခွဲစိပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မခွဲစိပ်မှီ ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့…
November 10, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on အံ့သြသွားမယ်. ကြက်သွန်နီဥ ခြေဖဝါး လေးမှာကပ်ပြီး အိပ်ကြည့်ရင် ရမည့်အကျိုးကျေးဇူး
ကြက်သွန်နီဟာ မြန်မာတို့ရဲ့ မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး ဟင်းတိုင်းလိုလိုမှာ ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်ကြပါတယ်။ အသုပ်တွေမှာလည်း ထည့်သုပ်ကြသလို ကြော်၍လည်း စားကြပါတယ်။ ကြက်သွန်ဟာ စားရုံသာမက ဆေးဘက်ဝင်တဲ့အရာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် အိမ်သုံးဆေးဝါးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ တရုတ်ရိုးရာဆေးနည်းမှာတော့ ကြက်သွန်နီကို ခြေဖဝါးအောက်မှာထားပြီး အိပ်စက်ခြင်းဟာ…
November 10, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on အပူတွေ အထက်တက်နေလား လွယ်လွယ်လေးပါ တကယ် လုပ်​ကြည့်​​စေချင်​ပါတယ်​..
ပျောက်စေချင်လွန်းလို့ ပြန်တင်ပေးပါတယ်နော်။ အနည်းဆုံး သုံးရက် စမ်းဖြစ်အောင် စမ်းကြည့်​ပါအုံး။ အပူထုတ်ပြီးရင်တော့ ​ရေမချိုးရတော့ဘူးနော်။ သတိထားအုံး။ အပူတွေ အထက်တက်နေလား လွယ်လွယ်လေးပါ။ အပူတွေအောင်းလို့ ဖနောင့် နာနေတဲ့အခါ ရိုးရိုးအပူအောင်းလို့ ခါးနာနေတဲ့အခါ ခြေထောက်ရေစိုလို့ အပူတွေ အပေါ်တက်ပြီး…
အမောလည်းပျောက် အားလည်းရှိမဲ့ ကြက်ဥနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ…ချောင်းဆိုးသွေး ပါ ပန်းနာရင်ကြပ် TBပျောက်ဆေးနည်း
November 10, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on အမောလည်းပျောက် အားလည်းရှိမဲ့ ကြက်ဥနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ…ချောင်းဆိုးသွေး ပါ ပန်းနာရင်ကြပ် TBပျောက်ဆေးနည်း
ချောင်းဆိုးသွေးပါ ပန်းနာရင်ကြပ် TBပျောက်ဆေးနည်း ==================== လက်တွေ့ပျောက်ကင်းလို့စေတနာရှေ့ထားဆေးနည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမေလက်တွေ့ပါချောင်းကတဟွတ်ဟွတ်သွေးစတွေကပါသေးတယ်။. မောလိုက်တာကလည်းဖိုထိုးနေတဲ့အတိုင်းပဲအသားရည်ကလည်းညိုညစ်ညစ်မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့။ ကံကောင်းချင်တော့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဆေးမီးတိုနဲ့ရောဂါအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆေးနည်း အိမ်မွေးကြက်ဥတလုံးထက်ခြမ်းခွဲ ပန်းကန်တလုံးထဲထည့်။ ကြက်ဥအခွံတခြမ်းဖြင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်ထည့် ကြက်သွန်ဖြူ တလုံးအခွံနွာပါးပါးလှီးဖြူးထည့်။ ဒန်အိုးထဲရေအနည်းငယ်ထည့်အောက်မီးနှင့်ကြက်ဥကိုပေါင်းခဏနေကျက်ပြီ တနေ့သုံးကြိမ်စားအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည် OK Maung…
November 10, 2018 popin vdoကျန်းမာ​ရေး / ဗဟုသုတNo Comment on ကင်ဆာရောဂါ သတိပေးလက္ခဏာများ
ကင်ဆာရောဂါများတွင် သတိပေး၊ အသိပေးလက္ခဏတွေ ရှိနိုင်၊ ပြနိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ လူများ ကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်ရခြင်း သည် အန္တရယ်ဖြစ်နိုင်မှန်းသိလျက် အလိုလိုက် အမိုက်မှားကာ အန္တရယ်နှင့် ကစား နေ မိသည် များလည်းရှိနိုင်သည်။ မည်သို့ပင် ရှိစေကာမူ…
November 9, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on လူတိုင်းမသိနိုင်တဲ့ ကြောင်လျှာသီးရဲ့ စွမ်းပကား
ကြောင်လျှာသီးက ဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အသီး၊ အညွှန့်၊ ပန်းပွင့်တွေကအစ စားသုံးလို့ရပါတယ်။ ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ အနည်းငယ် ခါးသက်သက် အရသာ ရှိတာကြောင့် အရသာရှိတဲ့ ဟင်းလျာအဖြစ်ချက်ပြုတ်စားနိုင်သလို ကျန်းမာရေး အာနိသင်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင် ကြောင်လျှာသီးမှာ…
November 9, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on သတိထားစရာ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ ပျားလိမ္မော်ကလေး
Zawgyi Version ဒီရာသီဆို ကျမတို့ဆီမှာ လိမ္မော်သီးတွေ လှိုင်လှိုင်စားရပြီဆိုတော့ ဈေးကနေ တရုပ်ကဝင်တဲ့ ပျားလိမ္မော်လေးတွေဝယ်လာဖြစ်တယ်…အိမ်ရောက်တာနဲ့ရေအမြန်ဆေးပြီးရေခဲသေတ္တာထဲအေးအေးလေးစားရအောင် ထည့်ထားပြီး ခနနေအမောပြေလေးတလုးံထုတ်စားလိုက်တယ်…အခွံမခွာခင်အခွံပေါ်မှာ အဖြူဖတ်လေးတွေတွေ့လို့ နောက်တကြိမ်ရေထပ်ဆေးဖြစ်တယ်… တလုပ်စာလေးမို့ တခါထဲဝါးစားလိုက်ပြီး နောက်မှာတော့….ချက်ချင်းဆိုသလို စပ်ဖျင်းဖျင်း အရသာခံစားမိတော့ အော်… အခွံခွာပြီးလက်မဆေး…
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေအတွက် အထူး သတိပေးချင်ပါတယ်။
November 8, 2018 popin vdoကျန်းမာ​ရေးNo Comment on ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေအတွက် အထူး သတိပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေအတွက် ကျွန်တော် သတိပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောစကားကို ယုံကြည်ပါ…ပြီးတော့ တဆင့်စကား တဆင့်နားထဲရောက်အောင် ပြောပြပါ။ သာလီဒိုမိုက်(Thalidomide) ဆိုတဲ့ ဆေးဟာ စိတ်ငြိမ်ဆေး၊အိပ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကာလအတွင်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ မူးဝေအော့အန်တတ်သည့်ဝေဒနာ(Morning Sickness)ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ဒိအပြင် အရေးပြားရောဂါ၊အရေပြားသွေးလေးဘက်နာ၊HIV…
အတွင်းသားတွေပါ မြင်နေရတဲ့ ဘောင်းဘီတိုတွေ ဆင်ယင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ Momoland အဖွဲ့ဝင်များ
Categories Select Category ၀တ္ထု (11) celebrity (394) Dice (1) IT နည်းပညာ ဗဟုသုတ (44) Life (39) Uncategorized (42) ကျန်းမာ​ရေး (535) ချက်နည်းပြုတ်နည်း (3) ဂျင့း (5) ဂျင်း (13) ဆယ်​လီ (789) ထီပေါက်စဉ် (17) ထူးဆန်းထွေလာ (118) နည်းလမ်းလေးများ (41) ပညာရေး (22) ကြားရသိရသမျှ (2,586) ဗဟုသုတ (1,567) ဘ၀ခွန်အားဖြည့် (9) ဘာသာရေး (41) မိုး​လေဝသ သတင်း (89) မှုခင်းသတင်း (216) ပြည်​တွင်းသတင်း (990) ဖြစ်ရပ်မှန် (168) မြန်မာအိုင်ဒေါ (82) လူမှုဘ၀ (146) သတင်း (235) သတင်းထူး (69) သရဲ၊တ​စ္ဆေ (126) သိမှတ်စရာ (130) ဟာသ (190) အချစ်​+ရသ (109) အစားအသောက် (11) အလှအပ​ရေးရာ (16) အားကစား (275) အနုပညာသတင်း (654) ဆောင်းပါး (51) နောက်ဆုံးရသတင်းများ (69) ဖျော်ပြေရေး (2) ​ဗေဒင်​ (113) နိုင်​ငံတကာသတင်း (634)